September 15, 2021 Xuseen 9
Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, oo safar shaqo maanta ku tegey Degmada Buurtinle ee Gobolka Nugaal ayaa dhaggax dhigay Mashruuca dib-u-dhiska waddada isku xirta magaalada Jalam iyo degmada Xarfo.
Mashruuca dib-u-dhiska Waddada Jalam-Xarfo waxaa iska kaashanaya Dowladda Puntland iyo Midowga Europe, wejiga koowaad la dhisaya 65KM taasi oo qorshuhu yahay in lagu dhameystiro muddo 8Bilood ah .
Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa muujiyay muhiimada ay wadadan u leedahay isku xirka Gobolada Puntland, wuxuuna kormeeray Shirkadda dhiseysa isagoo warbixin ka dhegaystay Wasaaradda Howlaha Guud iyo Masuuliyiinta gacanta ku haynaya dhismaha wadada inta uu socdo.
Oo Karaash weli ma QASABADIHII reeruhuu ku ciyaarayaa?!
Shaqo wacan karaasha.
maryooley waxaan isdabamirid iyo tuug saqajaan maaheey waxkale mayaqaanin habankii beey sibirka iyo jiigada xadin.Garowe markii la dhisaayee madaarka alabtii ayeey shirkadii kawada xadeen. turkigii qeelo ayuu afka furtay boob tuug ayaa nalaku hayaa sibrkii alwaaxdii jingadihi xataa daamurkii ayaa la xadaayaa sadex koor ayeey joojiye shaqadii markii dabe cabdiwali gas ayaa laba malyaan siiyee turkigii.Marka waxaa fiicnaan lahayd in lawacyi geliyo daka degan meesha wadadu mareeyso somalido hadeey maqlaan meelbaa shirkadi timid waa usoo kaditagaan waxaan kawada habeenki ayeey xaalufiaan xadaan ama haw baahnaado ama yuu u baahnaan.Shiinihi wada dhisijiray ayaa oran jiray dakii wadanka laha meeyeh shacbi khariban maskaxda ka daaley jaad,sino iyo khamri raganimo mooday, dadnimadu waxeey ku jirtaan in wax latacbado meel cuskuk oo jaad ruug baa udaran
Hade Boowe haddii degaankaaga cilladaas ka jirto maxaad soomaalida oo idil ugu wada shaabadayn tuugnimada?!!!
Laami Somali standard ah looma baahna.
International standard ayaa loo baahan yahay qiimahuna 1 Million Per Mile.
Haddii aan la hayn lacagta cadadkaas le’eg ha la sugo ilaa inta laga helaayo.
Intaas la hor jid-cadde fiican ha la sameeyo
Kharaska iyo shaqada ugu badan ee jid dhisidu waxay gashaa hagaajinta jid cadaha. Laamiga madoow ee korka laga saarayo waa Rubuc barkiis qaymaha guud ee wadada ku baxaysa.
Madaxwayne Dani waa inuu sameeyo Saldhig Police oo Mobile ah ama guur-guura si khaas ahba ula shirkada wadada dhisaysa si looga hor tago wixii Kal hore dhacay.
Waxan sidaas u leeyahay hadii Boliiska laga soo diro marba Saldhiga Boliiska ee ugu dhow Meesha shaqadu ka socoto masuuliyada ayaa balaaranaysa taas oo keeni karta habacsanan iyo (He said & She said).
Waxaa loo baahan yahay Special police Unit toos u hoose Taga Taliyaha Qaybta Boliiska Gobolka.
Hadii Boliiska Puntland u maleeyan Shaqadan mid adag ama rough ah waa in mudo kooban ha lagu soo badalo Ciidamada Puntland ka Difaaca Buuraha Sil-Silada ah ee ku gadaaman Gobolada Bari iyo Sanaag kuwaas oo Saldhigyo ka samaysta Qaxabaha iyo Boholaha ay ka furtaan Argagixisada.waa kaftan dhable.
Cid midowga Yurub ka socota oo dhagax dhigga ka muuqata lama arko,wadaduna waa tii hore loogu fashilmay ee GIZ oo Jarmalka ah malaayiintii ay Ku bixisay Gaas musuqay markii la qiimeeyay inta dhisnayd oo camuud ahna la ogaaday in $14.000 wax ka yar galeen.
Markan yaa la khasaarin fursaddan,hana loo fuliyo sida ugu wanaagsan.
Dhibta oi dhan waxa wada madaxda maamulka min Madaxweyne ilaa waziir oo raba in qandaraaska dhismaha ay u gacan geliyaan dad qaraabo la ah oo lacagta ay la lunsadaan,waana midda lugooyada Ku ah Puntland.
Jidkaas sanooyin badan baa la lahaa waa la dhisayaa iyo gacantaa lagu hayaa.Hadda ka hor meeqa jeer baa la dhagax dhigay jidkaas.